चीन जोर बल असर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | लिक्सिन
जोर बल असर तीन भागहरु बाट बनेको छ: सीट धुने, शाफ्ट धुने र स्टील बल पिंजरा। यो छुट्टै असर को एक प्रकार हो। शाफ्ट धुने र सीट धुने पिंजरा र इस्पात बल को घटक बाट अलग गर्न सकिन्छ। यो अक्षीय भार सहन सक्छ, तर रेडियल लोड छैन।
तनाव अनुसार, जोर बल असर एकल-दिशा जोर बल असर र डबल-दिशा जोर बल असर विभाजित गर्न सकिन्छ।
एकल-दिशा जोर बल बियरिंग्स रेसवे र एक पिंजरा मा निर्देशित बल संग दुई washers मिलेर बनेको छ। वाशर सपाट बस्ने सतहहरु छन्, र यही कारण हो कि उनीहरु लाई समर्थन गर्नु पर्छ ताकि सबै बलहरु लाई समान रूप बाट लोड गर्न सकिन्छ। बियरिंग्स अक्षीय लोड मात्र एक दिशा मा बोक्छन्। उनीहरु रेडियल बलहरु बोक्न सक्षम छैनन्।
डबल दिशा जोर बल बियरिंग्स केन्द्रीय शाफ्ट वाशर र फ्लैट बस्ने सतहहरु संग दुई आवास वाशर को बीच बल संग दुई पिंजराहरु छन्। शाफ्ट धुने दुबै पक्ष मा raceways छ र जर्नल मा तय गरीएको छ। बियरिंग्स दुबै दिशा मा अक्षीय बलहरु मात्र बोक्न सक्षम छन्।
नोट:यो मात्र टेपर रोलर बियरिंग्स को एक सानो भाग मोडेल संख्या हामी संग छ, यदि तपाइँ एक तपाइँलाई चाहिन्छ एक पाउन असफल, कृपया हामीलाई सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्। अग्रिम धन्यवाद।
A.tube प्याकेज + बाहिरी दफ़्ती + pallets
B. एकल बक्स + बाहिरी दफ़्ती + pallets
C.tube प्याकेज + मध्य बक्स + बाहिरी दफ़्ती + pallets
D. तपाइँको अनुरोध अनुसार।
1. ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु लाई पुरा तरिकाले बनाइएको प्रचुर मात्रा मा रेकर्ड संग बुझिन्छ र ग्राहकहरु को समय बचत गर्न सकिन्छ।
2. हामी ग्राहकहरु को चित्र को लागी धेरै ध्यान दिन्छौं, उनीहरुलाई हाम्रा प्राविधिकहरुलाई पेस गर्नुहोस् र सही जवाफ दिनुहोस्।
3. हामी ग्राहकहरु को लागत कम गर्न को लागी सबैभन्दा किफायती वितरण सेवा को लागी शिकार।
4. हामी ग्राहकहरु लाई कुनै पनि समय उत्पादन को स्थिति रिपोर्ट।
5. बिक्री पछि सेवा विश्वसनीय छ र ग्राहकहरु को प्रतिक्रिया गम्भीरतापूर्वक विचार गरीन्छ।
6.The नवीनतम बजार प्रवृत्ति सधैं हाम्रो ग्राहकहरु को लागी प्रदान गरीन्छ।
अघिल्लो: स्टेनलेस स्टील बल
अर्को: सुई रोलर असर
कोणीय सम्पर्क जोर बल असर बल
जोर बल असर 51103
जोर बल असर 51212
बल बल असर बल
बल भएको; बल लगाउने
पीतल बल, सानो कपर बलहरु, H62 पीतल बल, पीतल बल जाँच वाल्व, शुद्ध ठोस कपर बल, H65 पीतल बल,